Hargaysa: Ururada Bulshada Rayidka ah ee Madaxa-banaan Oo Ku Baaqay In Doorasho La Qabto 2020
Monday June 29, 2020 - 09:35:27 in News by Hadhwanaag News
Ururada Bulshada Rayidka ah ee Madaxa-banaan (ISCCO Somaliland) waxa ay soo dhowynayaan asnixinta labada xubnood ee Golaha Wakiiladu maanta ansixiyeen, kuwaas oo dhamaystiraya xubnaha Gudida Doorashooyinka.
ISCO Somaliland waxa ay adkaynayaan muhiimadda ay leedahay in doorasho la qabto sanadkan 2020 gudihiisa.
Dawladda Somaliland waxa ay qaaday dhamaan xanibaadihii la xidhiidhay COVID-19 laga bilaabo 30 June 2020. Annaga oo og in cudurku dib u dhac ku keenay diyaargarawga, waxaannu sidoo kale ogaysiinaynaa daneeyayaassha in loo baahan yahay in dib loo bilaabo dadaalada si waxtar leh oo degdeg ah.
Doorashooyinka Baarlamaanka iyo golayaasha deegaanadu mudo dheer ayay dib u dhacsanaaayeen. Dadwaynuhu wuxuu u baahan yahay oo xaq u leeyahay inuu codeeyo.
Sidaasdarteed, waxaannu ugu baaqaynaa Baarlamaanka inuu ansixiyo xeerarka doorashooyinka.
Waxaannu ugu baaqaynaa xukuumadda inay soo bandhigto qorshe hawleed, la shaqayso dhamaan daneeyayaasha islamarkaana ay fuliso masuuliyadaha ka saaran xagga maaliyadda iyo mamaulka ee la xidhiidha qabashada doorashada 2020 gudihisa.
ISCO Somaliland members:
1. Centre for Policy Analysis
2. Centre for Youth Empowerment,
3. COMPAD Human Rights and Community Organization
4. Garsoor Social Development organization
5. Horseed Organization
6. Hope Development organization
7. Human Rights Centre
8. Solidarity Youth Voluntary Organization (SOYVO)
9. Somaliland Street Children Rehabilitation Centre
10. Somaliland Women Association (SOWA)
11. Somaliland Women Development Centre (SOWOD)
12. Voice for Somaliland Women Minority Organization (VOSOMWO)
13. Hodan Women Relief Organization
Ms Sahra Mohamed Ali
Mobile: +252 63 4329950